ငန်တာလေးမှ စားချင်နေမိတဲ့ အကြောင်းအရင်း - Hello Sayarwon
ငန်တာလေးမှ စားချင်နေမိတဲ့ အကြောင်းအရင်း
အချို၊ အချဉ်၊ အဖန်၊ အခါး၊ အစပ်၊ အငန်ဆိုတဲ့ အရသာတွေထဲမှာ အငန်မှ အငန် ဘာစားစား ငန်ငန်လေးမှ စားချင်နေမိတယ် ဆိုတဲ့ သူလေးတွေ ရှိလား…… ဒါဆိုရင်တော့ ဒီဆောင်းပါးလေးက သင့်အတွက်ဆိုတာ သေချာနေပါပြီ။
ကဲ …….. ဘာကြောင့်များ ငန်တာလေးကိုမှ စားချင်နေတာလဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။
အငန်ကို ဘာကြောင့် ခံတွင်းတွေ့ကြတာလဲ…..
အငန်ဓာတ်က တော်တော်လေး စွဲလမ်းစေနိုင်တဲ့ အရသာ တစ်ရပ်ပါ။ ဦးနှောက် နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအများစုက အငန်ဓာတ်ကို နှစ်ခြိုက်ကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ဆားဓာတ်က သူတို့ကို ရှင်သန်စေနိုင်လို့ပါ။
ဆား၊ အငန်ဓာတ်က တကယ်တော့ ခန္ဓာကိုယ် ရှင်သန်ဖို့ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အရာ တစ်ခုပါ။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာ ဆိုပေမယ့် လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျန်းမာစေဖို့ဆိုရင် တစ်နေ့ကို ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်း (၁) ဇွန်းစာထက် ပို မစားသင့်ပါဘူး။ တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုသလိုပေါ့။
ပုံမှန်ထက် လွန်ကဲတဲ့ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်ကို ခံစားနေရတဲ့ အခါမျိုးမှာတော့ အငန်ဓာတ်ကို လိုတာထက် ပိုပြီး တောင့်တ တတ်ကြပါတယ်။ ဒါက ဘာကြောင့်များလဲဆိုတာကို အတူတူ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်လား ……….
ခန္ဓာကိုယ်က လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့ အရည်ပမာဏကို လိုအပ်ပါမယ်။ ကျန်းမာနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ် ကျဆင်းလာတဲ့အခါ အလိုလိုနေရင်း အငန်ဓာတ်ကို တောင့်တမိလာပါတယ်။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်က လိုအပ်နေတဲ့ ရေဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့အတွက် အစားအစာ နဲ့ ရေကိုသောက်ဖို့ လှုံ့ဆော်နေတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ရေဓာတ် နည်းလာတဲ့အခါ အငန်စားချင်တာနဲ့ အတူ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အရည်တွေက သတ္တုဓာတ်တွေပို သယ်ဆောင်သွားပါတယ်။ ဒီသတ္တုဓာတ်တွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ထောက်ကူပေးပါတယ်။ အဆိုပါ အရည်ဓာတ်က နည်းလာတဲ့အခါ အငန်ဓာတ်ကို တအား တောင့်တတတ်သလို အခုလို လက္ခဏာတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲမယ် စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်က adrenal ဂလင်းတွေက ရှင်သန်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ Addison ရောဂါက ဖြစ်ခဲတဲ့ ရောဂါ တစ်ခုပါ။ ဒီရောဂါ ဖြစ်တဲ့အခါ adrenal ဂလင်းတွေက ဟော်မုန်းတွေကို လုံလောက်အောင် မထုတ်လုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီရောဂါ ခံစားနေရသူတွေမှာ အငန် အရမ်းစားချင်တာလိုမျိုး လက္ခဏာကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အငန် အရမ်းတောင့်တတာနဲ့အတူ
အရေပြား အထူးသဖြင့် မျက်နှာမှာ အကွက်တွေ ဖြစ်တာ
ပါးစောင်ထဲမှာ အနာပေါက်တာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရှိနေတဲ့ adrenal ဂလင်းတွေက ကော်တီစော ဟော်မုန်းတွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ကော်တီစော ဟော်မုန်းတွေက သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းညှိပေးသလို စိတ်ဖိစီးမှုကို တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ထွက်ရှိတာပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အငန်ဓာတ် များလေလေ စိတ်ဖိစီးစေနိုင်တဲ့ ကော်တီစောက ကျဆင်းလေလေပါ။ ဒါကြောင့် ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖြေလျှော့ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်က အငန်ကို တောင့်တတာပါ။
Bartter syndrome ခံစားနေရသူတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဆိုဒီယမ် (အငန်ဓာတ်) ကို မစုပ်ယူနိုင်ပါဘူး။ စားလိုက်သမျှ ဆိုဒီယမ်တိုင်းဟာ ဆီးကနေတဆင့် ပြန်ထွက်သွားပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရေရှည်မှာ ကိုယ်တွင်းမှာ ဆိုဒီယမ်လျော့နည်းလာပြီး နာတာရှည် ဆိုဒီယမ် မပြည့်ဝမှုကို ခံစားရပါတယ်။ ဒီဝေဒနာကို ခံစားနေရသူတွေမှာလည်း အငန်ဓာတ်ကို ပုံမှန်ထက် ပိုစားမိတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
အငန် အများကြီး စားတာအပြင် အခုလို လက္ခဏာတွေကိုလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဆီး ခဏခဏ သွားတာ
ကျောက်ကပ် ကျောက်တည်တာမျိုးတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်တောင် အစောပိုင်းကာလတွေမှာ မေမေတွေအနေဲ့ ပျို့အန်တာ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောတာတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေက ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရေဓာတ် ဆုံးရှုံးတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်က ဆားပိုမို စားချင်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ရာသီမလာခင် ရက်အတော်ကြာကတည်းက စိတ်ခံစားမှု ပြောင်းလဲတာ၊ အိပ်ရေးပျက်တာအပြင် အစားအစာတွေကို အရမ်း စားချင်တာမျိုး ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ရာသီအကြို ကာလမှာ အချို အရမ်းစားချင်တာမျိုး ခံစားရနိုင်သလို အငန် တအားစားချင်တာမျိုးလည်း ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကဲ …… ပရိသတ်ကြီးရော ဘာကြောင့် အငန်မှ အငန် တောင့်တမိနေတာလဲ…….
Why do we love salt so much? https://www.bhf.org.uk/what-we-do/news-from-the-bhf/news-archive/2018/december/why-we-love-salt Accessed Date 22 September 2021
Salt craving: A symptom of Addison’s disease? https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/addisons-disease/expert-answers/salt-craving/faq-20057988 Accessed Date 22 September 2021